Bras na panti 730: E jidere onye ohi uwe ime ime na Japan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Bras na panti 730: E jidere onye ohi uwe ime ime na Japan
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • omenala • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ihe yiri ihe na -adịghị mma nke izu ohi uwe ime abụghị ihe a na -ahụkarị na Japan.
Ndị uwe ojii Japan jidere nwoke maka izu ohi akwa na panti.
Nwoke nọ na -ezuru uwe ime ụmụ nwanyị n'ebe a na -asa ákwà.
Ndị uwe ojii chọtara iberibe uwe ime 730 zuru n'ụlọ onye a na -enyo enyo.
Ndị uwe ojii n'obodo Beppu nke dị na ndịda Japan ejidere onye a na-enyo enyo maka izu ohi uwe ime akwa ụmụ nwanyị 730 site na igwe ncha akwa, mgbe nwa akwụkwọ kọleji dị afọ 21 kọrọ na ụzọ abụọ uwe ime ya apụla n'ụlọ ebe a na-asa ákwà.
Beppu Ndị uwe ojii nyochara ụlọ Tetsuo Urata dị afọ 56 wee gwa ndị mgbasa ozi na ha "ejichibeghị ụdị panti a n'afọ niile."
Ndị uwe ojii jidere uwe ime nwanyị 730 n'oge nyocha, nke sochiri ebubo megide Tetsuo site n'aka nwa akwụkwọ mahadum dị afọ 21 a na-akpọghị aha. Ọ gwara ndị uwe ojii na Tetsuo etinyela uwe ime ya ụzọ isii n'ime akwa akwa ebe a na August 24.
A kọrọ na onye a na -ebo ebubo kwupụtara na ya zuru ohi akwa ime ahụ a chọtara n'ụlọ ya.
Ihe yiri mgbaasị nke izu ohi uwe ime abụghị ihe a na -ahụkarị na ya Japan.
N'ọnwa Maachị, ndị ọchịchị boro Takahiro Kubo, onye dị afọ iri atọ, ebubo izu uwe ime na uwe mmiri dị narị anọ na iri anọ na anọ nke ụmụ agbọghọ nọ na ndịda ọdịda anyanwụ mpaghara Saga.
N’afọ 2019, ndị uwe ojii chọtara ihe karịrị uwe ime nwanyị dị otu narị na otu narị ka edobere na ikpe futon mgbe ha wakporo ụlọ Toru Adachi na mpaghara Oita nke dị n’ikpere mmiri, onye Japan ọzọ na -enyo enyo na -ezu ohi uwe ime.